Ungashandure sei Vanowaka Van kuenda kune Inowanika Wiricheya Van
Posted on November 12, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Iwe unogona kushandura yakazara-saizi van kana minivan nekuisa izvo zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kune wiricheya mushandisi kuti apinde uye abude mumotokari. Wiricheya van shanduko dzinotendera munhu kuti apinde nekubuda muvha pasina kukonzera kusagadzikana kwaari kana kune vamwe. Usati watanga kugadzirisa yako kombi, kutsvagisa chinhu chakakosha. Dzinenge makumi mana shanduko dzinogona kuitwa kune yakajairika van. Mari yacho inogona kuve chero pakati pe $ 10,000 kusvika $ 20,000 zvichienderana nezvaunoita uye iyo mhando yehunyanzvi iwe yauri kutsvaga.
Verenga zvakawanda pamusoro mutengo pano: https://www.karmanhealthcare.com/blog/2013/07/16/the-cost-of-a-wheelchair-van-conversion/
Kana iwe uchitova neyako kombi, saka zvingangoita inogona kushandurwa nyore nyore. Nekudaro, haazi ese emhando dzemhando dzinogona kuchinjwa. Rudzi of shanduko dzakaitwa to a wiricheya zvinoenderana pamagadzirirwo emota, modhi, mugadziri, gore, uye mileage yakazara.
Mimwe mienzaniso inogona kushandurwa inosanganisira zvinotevera:
Tanga shanduko dzako nekusarudza inozove yako yekupinda maitiro. Iwe uchave uine divi kana yekumashure yekupinda? Vaviri vane yavo zvinobatsira uye yakapusa zvinoenderana nezvinodiwa neiyo wiricheya wega. Kuve nekupinda padivi kwakajairika kune avo vari passenger uye avo vachange vachityaira mota vega. Nepo kupinda kwekumashure kuri kwekutakura chete.
Inotevera kuisa hupenyu chaihwo or Ramp. Ive neshuwa yekutsvaga ramp uye anosimudza kuti uwane iyo ine akanakisa maficha emota yako. Iwe unozofanirwa kusarudza kuti iwe unoda otomatiki kana manyore kusimudza.
Kuwedzera anchor system icha chengetedza iyo wiricheya panzvimbo uye rubatsiro kudzivirira kukuvara. Pane zvakawanda zvingasarudzwa pakusarudza anchoring masisitimu. Iwe unogona kuisa mari musimba tie pasi kana inodzoserwa kana yakajairwa mabhandi. Izvi zvinokuchengetedza iwe neako wiricheya yakachengeteka panguva dzekufamba kwako.
Simba Kugadzirisa Zvigaro
Kuisa simba chinja zvigaro ndizvo kazhinji nhanho inotevera mukushandura yako van. Izvi zvakagadzirirwa kubatsira kupinda mukati nekubuda mumotokari. Zvigaro zvinogona kupa yakazvimirira kukwirira, kutenderera, uye kumberi kana kumashure kwekufambisa kugadzirisa. Vanotendera avo avo kazhinji vasingakwanise kukwira pachigaro kuti vazviite zvakachengeteka uye zvakanaka.
Maoko ekudzora anopa rusununguko mumugwagwa uye anotendera vanoshandisa wiricheya kutyaira ndega. Kuvaisa kunogona kudhura uye kuda kuda kudzidziswa kuvashandisa. Iyo inobvumira mutyairi kushandisa gasi uye mabhureki emabhureki. Nekudaro, kuisa ichi chimiro kunoenderana nekuti ndiani achange achityaira mota.
Kutendeuka kazhinji ichawedzera huremu hwakawanda kuvhavha. Shanduko dzepasi pemotokari dzinofanirwa kuverengerwa kana uchishandura kombi yako. Kukwidziridzwa kunogona kusanganisira kukwidziridza maasi, zvitubu, kuvhunduka, uye mabhureki. Kwete izvi chete zvinodzikisira mikana yekuputsa pamwe nekukanganisa, asi iwe unenge zvakare uri kuve nechokwadi chekuchengetedzeka kwako paunenge uchityaira.
Driving Wiricheya Kubva: https://www.karmanhealthcare.com/blog/2018/09/18/driving-in-a-wheelchair/